Rudzi rwaIsrael - Wikipedia
(Redirected from Judah (vana vaIsrael))
Rudzi rwemaJudha (Jews in English) rudzi rwevanhu vane madzitateguru akabva kunyika yeIsrael vari vanhu vakazvarwa nevanakomana gumi nevaviri vaJacob . Nhoroondo yerudzi urwu inotevedza madzibaba avo ane mazita akanyorwa muBhaibheri vanoti: Abraham; Isaac; naJacob. Abraham naSarah vakazvara mwanakomana anonzi Isaac uyo akazvarwa mumakore ekunge vose vakwegura. Uku kwakanga kuri kuzadziswa kwechivimbiso chaMwari pavakataura naAbraham vachiti uchava nemwanakomana kuburikidza nomudzimai wako Sarah. Mwari vakaitawo zvimwe zvitsidzo kuna Abraham zvinosanganisira: kuti huwandu hwevana vake huchawanda sejecha riri pamhenderedzo yegungwa; kuti Mwari vachapa nyika yeCanaan kuna Abraham nevana vake vaizotevera shure kwake; kuti Mwari vacharopafadza vana vaAbraham zita ravo rikaita mukurumbira; kuti avo vanoropafadza vana vechipikirwa vaAbraham navowo vacharopafadzwa; kuti avo vanotuka vana vaAbraham navowo vachatukwa.
1 Nhoroondo yaJacob
2 Mharadzirwa yemaJudha
3 MaJudah muZimbabwe
5 Rushigido rwemaJudah
Isaac akaroora Rebecca, vakazvara mapatya, mukuru ainzi Esau mudiki achinzi Jacob. Uyu mukomana mudiki ndiye akaenda pamberi pababa vake nounyegeri akakwanisa kuti baba vamupe ropafadzo dzedangwe dzaifanirwa kunge dzakagadzwa pamukoma wake Esau. Mushure mokunge aba maropafadzo sezvizvi, Jacob akatiza pamusha akanogara mumusha wemadziSekuru ake hanzvadzi dzaAmai vake. Ikoko Jacob akanoshandira Sekuru vake Laban zvichitevedza chivimbiso chekuti Jacob aizopihwa mukunda wavo Rachel kuti ave mukadzi wake. Pamusi wekuti chitsidzo chizadziswe, Laban akapinza mukunda mukuru Leah mumba maJacob, Leah akava ndiye mukadzi wekutanga waJacob. Mushure mezvo Jacob anonopopotedzana naLaban, vakazoguma vatenderana kuti Jacob ashande mamwe makore masere kuti apihwe Rachel somukadzi wechipiri. Kwapera makore mazhinji Jacob akadzokera kumusha kwake kuCanaan mushure mokunge audzwa naMwari kuti achidzokera kwake. Pakuenda Jacob akanoenda nevarongo vaviri vaiva varandakadzi vemadzimai ake Leah naRachel. Leah naRachel vakapa Jacob varongo ava kuti vagozvarira Jacob vana. Jacob akava baba wevanakomana gumi nevaviri.
Jacob vanakomana vake vakayambukira kuEgypt vachitsvaga chokudya mumwaka wenzara. KuEgypt vanoyamurwa naJoseph mwanakomana waJacob uyo akanga atengeswa nevakoma vake muhuranda. Panguva iyoyo Joseph akanga otonga segurukota reEgypt anorayira vakoma vake kuti vanounza baba vake nemhuri yose - mambo weEgypt anovagamuchira zvakanaka fani achivapa dunhu reGoshen kuti vagareko nezvipfuwo zvavo. Joseph nevakoma vake vanofa vachisiya mhuri dzavo dzichigara muEgypt. Kwapera makore mazhinji, kunouya mumwe mambo akanga asingazive utongi hwaJoseph uye chirangano chaivepo nerudzi rwemaJudha. Mambo aitya kuti vana vaIsrael vakanga vawanda zvokuti muhondo aizogona kukurirwa kana maJudha vakabatana nevavengi vake. Saka mambo anoranga nemachinda ake kuti vabate maJudha kuvaita varanda vachikanya zvidhinha nokuita mamwe mabasa amambo Pharaoh. Panguva iyoyi vana vaIsrael vanochema kuna Mwari, ivo Jehovha vachibva vamutsa Moses kuti atungamire rudzi rwaIsrael kubva muEgypt kuenda kunyika yechipikirwa yeCanaan. Urwu ndirwo rudzi rwakatungamirwa naMoses kubuda muEgypt rwudzi urwu rwakapiwa Mitemo gumi yaMwari iyo yaidzidziswa naMoses apo akabva kunosangana naMwari pagomo reSinai.
MaJudah akauya muZimbabwe panguva yakauya Varungu ndokuumba Chita chavo chemaJudah mugore ra 1895. Ichi chita chaitungamirwa naJoe van Praagh akava Mayor wechiJudah wekutanga muguta reHarare. Milton Park muHarare ine mugwagwa wakapiwa zita raJoe van Praagh. MuGuta reKadoma kwakambova naMayor wechiJudah akagadzwa mugore ra1956; murume uyu ainzi Robert Sternberg.
Hugari hwemaJudah munyika yeZimbabwe hwaderera kubva pahwaive panguva yeRusununguko. Vamwe vavo vakatamira kuSouth Africa, vamwe vachienda kuIsrael, USA nekuEurope. MaJudah anozivikanwa munhoroondo yeZimbabwe anosanganisira: Alfred Beit; Dr Michael Gelfand; Professor Laurence Levy; Joe van Praagh; B.S Leon; Sam Levy; Gary Thompson nevamweyo.
Mubayiro weNobel Prize wakavambwa mugore ra1901 nemururme ainzi Alfred Nobel akazvarwa kunyika yeSweden. Mibayiro yezvikamu zvinoti: Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace yakatanga kupiwa mugore ra1901. Peace Prize inopiwa kuOslo, Norway, mimwe mibayiro inopiwa kuStockholm, Sweden. Kunonzi chikamu gumi nemanomwe kubva muzana (18%) chemibayiro yeNobel Prize chakatorwa nemaJudah kubva pakavambwa mibayiro iyi.
Rushigido kana kuti Holocaust kuChirungu raiva jambwa rokuurayiwa kukuru kwemaJudah munguva yakarwiwa Hondo yePasirose yeChipiri. Urwu rushambwa rwakatungamirwa naAdolf Hitler neBato reNazi avo vakakonzera kuurayiwa kwemaJudah vaigara muGermany nevamwe vaigara kune mamwe matunhu akanga akapambwa neGermany munguva iyi kuEurope. Nyanzvi dzenhoroondo dzine fungidziro yokuti maJudah vakaurayiwa nejambwa iri vakasvika mamiriyoni matanhatu (6m). Shoko rekuti Holocaust rinoreva burnt whole, saka kwedu kuChiShona kwanzi rushigido kureva kuti muviri wemunhu waipiswa zvakaperera. Kushigida kana kushikita - to burn utterly.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudzi_rwaIsrael&oldid=85888"
Last edited on 12 Chivabvu 2021, at 12:00
This page was last edited on 12 Chivabvu 2021, at 12:00.